လမင်းခင်: August 2009
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံခေါင်းဆောင် ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့် တော်လှန်ရေးအင်အားစု ဆွေးနွေးပွဲ
ရှိတယ်ဗျာ ဘာလုပ်ဖို့ ထားလဲ
၂၀၁၀ က ၀င်လို့ ရတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်မပေးဖို့ လို့ တယ်
ဒီကနေ့မြန်မာပြည်နယ်စပ်တနေရာမှာ စည်းဝေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်၇ှိနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲအ
ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကတော့အများအားဖြင့် Activistတွေလို့ပြောရမဲ့
ဲ့powerlessတွေအများစု လို့ ပြောမယ်ဆိုရပါတယ် ။တက်ရောက်လာသူ ၇၀ နီးပါး ရှိပြီး ထဲမှာ ကိုမိုးသီးဇွန် ၊ ကိုမြတ်စိုး၊ဦးပီတာလင်းပင်(ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)ဦးချစ်တင်(ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
ကိုသံခဲ(၈၈၈၈ ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေနှင့် ABSDF ဥက္ကဌ) ဒေါက်တာကျော်ညွန့့်(DAB အတွင်းရေးမှုး) တို့ နဲ့အတူ ၈၈၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော် အများစုဖြစ်ပါတယ် ။ Powerless လို့ ဘာ့ကြောင့်
ပြောရလဲဆိုရင် လာရောက်သူအသီးသီးဟာ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ လက်ရှိ အခြေအနေအပေါ်မှာဖလှယ်ကြဆွေး
နွေးကြတာဖြစ်တာကြောင့် အားမနာတမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန် တာမို့ ပြီးတော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းအားကိုသာ
အခြေခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစချင်းဆွေးနွေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ပြည်ပမှာလမ်းပျောက်နေတယ်လို့ ပြော
လို့ ရတဲ့ နိုင်ငံရေး နဲ့ သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ ကို စဉ်းစားကြတာပါ။ ဘာကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ရလဲပြောရင်တော့
ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျကာတာ အစည်းအဝေး ကို အောက်ခြေက တော်လှန်ရေးအင်အားစု အများစု သဘောထားမပါတာ
ကြောင့် ပွက်လောရိုက်သွားတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲဆိုရင် မမှားပါဘူး
ဒီမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးပီတာလင်းပင် ကအဖွင့်အမှာစကားပြောပြီး လူငယ်
တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် စစ်တပ်ပြုတ်ကျရေးကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အနူးအညွှတ်တောင်းပန်
တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ဦးချစ်တင်မင်းလှအမတ်ကတော့နှစ်နှစ်ဆယ်ကြာပြီ ဘာ့ကြောင့်မအောင်မြင်သေး
တာလဲဆိုတာအဖြေရှာဖို့ ဆွေးနွေးသွားပါတယ် ။ ကိုမိုးသီးဇွန်ကတော့ လက်၇ှိအခြေအနေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိ
စစ်ရေးနဲ့သံတမန်ရေး ကို ဘယ်လို ပုံဖော်သွားကြမယ် ဆိုတာကို နောက်ထပ်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြဖို့ 
ABSDF မှကိုလွမ်းဏီကလည်း ကျနော်တို့ မျော်မြင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးဟာနအဖလမ်းပြမြေပုံနောက်
လိုက်မှာလား အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် တခုတော့ လို ပြီ -ပြီးခဲ့တဲ့ ဒပ်ဖရင် ကိစ္စ ဂျကာတာကိစ္စ-
တပ်ပေါင်းစု ၇ ဖွဲ့-- ဘယ်မှာလဲ ညီညွတ်ရေး ဘယ်လိုတိုက်မလဲ ဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲ ကြေညာချက်ထုပ်ရုံ
နဲ့ပြီးမလား တိကျခိုင်မာတဲ့ ရလဒ် စုဖွဲ့ မှု ဖြောင့်စင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးပစ်မှတ်တွေ ၇ှာဖွေရမယ် လို့ဆွေးနွေးပါတယ်
ကိုလွဏ်းဆွေ ရဲ့ လူထုတိုက်ပွဲ နဲ့ ပွဲ သိမ်းရမယ်ဆိုတာတွေ ကိုထက်အောင်ရဲ့ ဒီမှာ၇ှိနေတဲ့သူတွေ အသီးသီးဟာ
၈၈ ကစ ဟိုး ၆၂ ထဲက ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်သူတွေ က အစ အဖွဲ့ အစည်းအရေခွံတွေ ခွါချလိုက်ရင် သာမာန် ပြည်သူ
တွေပါပဲ ကျနော်တို့ ရဲ့ သဘော ထားလေးတွေ ကိုတော့ ပြည်သူသဘောထားလေးတွေ ဆိုပြီး ယူဆောင်ဖို့ တော့
လိုပါတယ် ဆိုတဲ့ သဘောထား တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်များကို မတ်ဆိတ်ပေးလိုက်ပါတယ် အဓိက က ကတော့
ဂျကာတာ မှာ ထိပ်သီးများသဘောတူပြီးတင်တဲ့စာတန်း ဟာ စဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့လို့ ပါပဲ ။။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ ချုပ် (ပြည်တွင်း) လူငယ်တာဝန်ခံဟောင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အိရွှေစင် ကတော့ တဦးတည်းသဘော နဲ့ ဂျကာတာကို
စုကြည် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ညှိနှိုင်းရေးဆိုတာပြည်တွင်းကပဲ စသင့်တယ် ပြောထားတဲ့အတွက် ကျမတဦးတည်း
သဘော နဲ့ တော့ ဒီလုပ်ရပ်ကိုလက်မခံဘူး ။ ၂၀၁၀ လို့ အမည်တပ် တာကလည်း န အ ဖ တီးနေတဲ့ ဆိုင်းနောက်
ကနေ လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး ၂၀၁၀ ကို စစ်အုပ်စု ကဇွတ်မလုပ်ခင် မှာ ကျမ တို့ တိုက်ရတာ စစ်အာဏာရှင်
ဖြစ်တယ် ၂၀၁၀ ပြီးလို့ စစ်အုပ်စု ကသူ့ ဖာသာ ဘယ်လို ပင် လိမ်လိမ် ကျမတို့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတစ်ရပ်
ကတိုက်ရမှာ တရားမမျှတပဲ အနိုင်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတခု သာဖြစ်မယ် ဒါ့ ကြောင့် ၂၀၁၀ ကို ကျမ တို့ ဖျက်နိုင်ဖို့ လိုတယ် ။ ကန့်ကွက်မဲ သွားထဲ့ ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ တဲ့ အမှားမျိုးကိုလည်း ပြည်ပအင်အားစု မှားခဲံပြီးပြီ စစ်အုပ်စုရဲ့
လမ်းပြမြေပုံ အချက်တိုင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့် ကွက် ဖို့မပတ်သတ်ဖို့ သဘောထားပဲကျမမှာရှိတယ် ဒါ့
ကြောင့် စစ်အုပ်စု ကို ညှိနှိုင်းတာဆွေးနွေးတာ ကို ကျမ မယုံကြည်ဘူး လက်မခံဘူး အပြတ်တိုက်မယ်ဆို ဘယ်
သူဦးဆောင်ဦးဆောင် ကျမတို့ နောက်ကလိုက်မယ် ။ ဟု ဆွေးနွေးပါတယ် ။ကိုသိန်းစန်းကိုအောင်ခိုင် မန်းမျိုးမြင့်
စသဖြင့်အသီးသီး က ၄င်းတို့ သဘောထား အောက်ခြေလူတန်းစားသဘောထား များကိုဆွေနွေးပြီး ကိုသံခဲ မှ
နိုင်ငံရေးဆိုတာတိုက်တာ နိုင်ငံတကာလွှတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲ တိုင်းပူးခွါ တိုက်ရတယ် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့ 
ဘယ်နေရာမဆိုလက်တွဲလုပ်ဖို့ လိုတယ် မိတ်ဖက် ပဌိပက္ခ အဆင့် ကတော့ရှိကြမှာပါပဲ ။ တသမတ်ထဲ ချီတက်
နိုင်မဲ့ အရည်အချင်း၇ှိဖို့ တော့ လိုတယ် ။
စဦးစားတဲ့နေရာမှာ ပထမ ပြည်တွင်းအား
ဒုတိယ -ဒုတိယနိုင်ငံ ထဲကအား
တတိယ တတိယနိုင်ငံထဲကအား အဓိက ကကျပါတယ် ။ ကျနော်တို့ ကတော့ အလယ်အ
လတ်အားပဲ တံတားပဲထိုးလို့ ရတယ် ပွဲသိမ်း တိုက်ဖို့ က ပြည်တွင်းပဲဖြစ်တယ်။ စသဖြင့် ကျယ်ပြန့် တဲ့ လက်တွေ့ 
ကျတဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းနာတွေ ဆွေးနွေးသွားပါတယ် ။ အဆုံးသတ်မှာ ကိုမိုးသီး ကတော့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တေံ နဲ့
ပတ်သတ်တာတွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားတဲ့ အတွက် နောင်လည်း ယခု ကြွရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲ
ကအမှန်တကယ် ရပ် တည်ဆောင်ရွက်နေသူတွေ နဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ လမ်းစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အဖြေနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချန်ရစ်၍ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်
သည် ။အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး စစ်ရေး သံတမန်ရေး နည်းဗျူဟာများ ချန်လှပ်ထား ခဲ့ခြင်းကို နားလည် နိုင်ပါစေ ။။
Posted by LRDP at 10:26 AM 1 comments Links to this post
ကျမနဲ့ စကားအခြေအတင် နှင့် နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပညာရှင်များ--ဟူသည်
ကျမ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က အမေရိကန် က ကျမတို့ ရဲ့ရဲဘော်တစ်ဦးနဲ့ စကားအခြေအတင်ပြော ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။သူနဲ့ကျမလူခြင်းခုမှတွေ့ ဖူးပေမဲ့ ကျမတို့တတွေကလူရင်း တွေပဲပေါ့ နင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲငါဘာလုပ်ခဲ့လဲလို့ မေးခွန်းနှစ်ခုကြားမှာပဲ လူရင်းတွေဖြစ်သွားပါတယ် ၈-၈-၈၈ထဲက ခင်လာခဲ့တဲ့သူတွေပမာပေါ့ ဒါဟာဒီမိုကရေစီ အရေးပုံကာလမှာ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်အားလုံးရဲ့ သွေးကစကားတွေ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပုံစံခြင်းခြားနားတဲ့အပေါ်မှာကျမကို အဲဒီ့ရဲဘော်က စေတနာစောဒက တွေနဲ့ နင်နိင်ငံခြား
ကိုသွား ///သွားသင့်တယ် လို့ စတင်တိုက်တွန်းတော့တာပါပဲ ။ သူကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်မှာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့
ခဲ့သူပေပဲဆိုတော့ သူ့ စေတနာစကား ကျမလက်ခံနားကြားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာ အာပလာလို့ ကျမပြော
လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအတုအယောင် ၊ခိုလုံခွင့်အတွက်နိုင်ငံရေးဟန်ပြ၊ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးလို့ ကြွေး ကျော်သူကများ လာပြောရင် ဖြင့် ကျမ ပါးစပ်ပေါက် နဲ့တွေ့ ဦးမှာ --တွေ့ ကို တွေ့ ဦးမှာ --ပေါ့
အကြေအလည် ဆွေးနွေးခဲ့ရပုံများကဖြင့် သူပြောတာ'' ငါတို့ တွေ နိုင်ငံခြားမထွက်ခင်က ငါတို့ ကိုယ်င့တို့ သိတ်
ဟုတ်လှချည် ထင်ခဲ့တာဟ ဟိုလည်းရောက်ရော ငါ တို့ သိထားတက်ထားတာတွေ ဘာမှမဟုတ်မှန်း သိတော့
တယ်။ နင်တို့ လည်း ကိုယ်ထင်ထားတဲ့ ကိုယ်မြင်တဲ့ ခြုံပုတ်လေးလောက် ကိုကြီးတယ်ထင်မနေနဲ့သွား နိုင်ငံ
ခြား တိုင်ပြည်တခုခု သူတို့ ဘာသာစကားတွေ မသင်ရတဲ့ အမေရိကန် ကနေဒါ လို မျိုး နိုင်ငံတွေ သွားစမ်းပါ
နင့်သမီးတွေ ခုချိန် ထက်ထက်မြတ်မြတ်နဲ့ ပညာ သင်နေရမဲ့အရွယ် ''--- တဲ့
"ကျမ ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံခြား ဆိုတာကျမလည်းမက်ပါတယ် တိုးတက်မယ် ခေတ်မှီမယ် ကျမမှာ မရှိတဲ့
ပညာရပ်တွေလည်းရမယ် ကျမသမီးလေးတွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပိုမယ် ဆိုတာကိုပေါ . ဒါပေမဲ့ ကျမငယ်
စဉ်ကတည်း က ဒီ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ လမ်း ကိုလျောက်ခဲ့တယ် နိုင်ငံရေးဆိုတာသိခြင်း နားလည်ခြင်းမရှိပဲကိုယ့်
ရှေ့လူတွေ အတုံးအရုံးသေတာတွေ တွေ့ပြီး မခံချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ရာက ခု ထိကျမမှာမပြီးသေးတဲ့တာဝန်တွေအ
လားခံစားနေရတုန်းပဲ -ကျမ လိုပဲ ရဲဘော်အသီးသီးကဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ နိုင်ငံခြားသွားသူတွေ ကြည့်ပဲ ဆိုရင်?''
အဲဒီ့မှာ သူက ထပ်ပြောပါတယ် ''ညီမတို့ မှာ CAPACITY & EDUCATION အများကြီးလိုသေးတယ် အကို
တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဒါတွေ အရေးကြီးတာ သူများနိုင်ငံတွေ ကြည့်အကိုတို့ တွေ သိတ်ကိုနောက်ကျနေတာ''
ဆိုပြီး ကျမ ကို တိုးတက်စေ့ချင်တဲ့စေတနာ ထပ်ပြောပြန်ပါတယ်
ကျမ ကနောက်ထပ် ထပ်ပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ် "ကျမတို့ ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီမိုကရေစီရဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ရမယ် ငါတို့ ဘ၀တွေ တိုးတက်မြင့်မားရမယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ 
ဒီလမ်းကိုလျောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး" ကျမသမီးတွေ ပညာရေး သူတို့ ဖာသာကြိုးစားရပါလိမ့်မယ် အကြီး
ကိုလည်းကျမအသိတွေပေးထားတယ် အငယ် ကို လည်း ဒီနိုင်ငံမှာပဲပြုစုပျိုးထောင်ပါမယ် အလင်းမ၀င် လက်
နက်မချရတဲ့နည်း နဲ့ပြန်ဝင်ရမယ် ဆို မြန်မာပြည်ပဲပြန်မှာပါ ။ ၂၀၁၀ ကို မဆိုလိုပါဘူး ကျမတို့ ပြန်ရမဲ့နေ့ ရှိ
လာဦးမှာပါလို့ကျမ ယုံကြည်ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုရင် မြန်မာပြည် က ကိုယ်ပြည် ကိုး ဒါ့အပြင်တဆက်
တည်းစကားကျွံခြင်းမဖြစ်ရအောင် နေလို့ ရသရွေ့အကြပ်အတည်းမကြီးမားသရွေ့ ကျမ နေနေဦးမှာပါ လို့ 
ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။အဲဒီ့လို့ပြောတဲ့ အခါ သူလက်လျော့ သွားတယ်ထင်ပါတယ် ကျမ ကအယူအဆ နဲ့ပြောနေ
တာ မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြောနေတာပါ ။
ဒါကတော့ကျမယုံကြည်ချက်ထဲက ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခု ကိုထွက်သွားပြီး ကျမကိုယ်ကိုယ်ဖြည့်ဖို့ ထက်တော်လှန်
ရေးအပြီးသတ်ဖို့ သာ ပို လို အပ်တယ်ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ပေါ့ ။နေမရလို့ ရပ်တည်ဖို့ မပြေလည်လို့ နိုင်ငံခြားထွက်
ရသူတွေ ကို စာနာနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ ငါတို့ တော်လှန်ရေးဝေးသေးပါတယ်ကွာ မပြီးနိုင်သေးပါဘူး ဒီတော့
တို့ ပညာရေးနဲ့ ဘ၀မြင့်ရေးအဓိက လို့ပြောလာမဲ့ / တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အားတော့နာပါတယ် --
တိုင်းပြည်ကိုပြန်မလာတာအကောင်းဆုံးပါပဲ ။ အဲဒီ့ရဲဘော်တစ်ဦး နဲ့ဆွေးနွေးခန်း ကတော့ ဒီမှာပဲပြီးပါတယ် ။။
သူလည်းကျမ ရဲ့ပွင့်လင်းမှုကိုလေးစားသလို သူ့ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ယနေ့ တာဝန်ယူမှုတချို့ ကိုလည်းသိထား
ကျမဆက်ပြီးတင်ပြချင်တာက ဒီကိစ္စ နဲ့ ဆက် -ဆက် နေတဲ့ပညာရှင်များရဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်း ဆိုင်ရာပါ ။။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်ဟာ ပညာမတက်သူတွေ အုပ်စိုး လို့ချွတ်ခြုံကျတယ်ပညာတက်တွေ နဲ့ပဲ ခေတ်မှီ တဲ့နိုင်ငံ
တော်သစ်တည်ဆောက်ရ မယ် ဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့ ၀ိသေသ ပါ အဲ --ငြင်းလို့ ရတဲ့ အရာကတော့ တော်လှန်
ရေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ ဒီဘ၀မှာပညာရှင် ဖြစ်ကာမှရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကတော့ကျမပြတ်ပြတ် သားသား
ငြင်းပြလိုက်ချင်တာပါပဲ ။ ပညာတက်ဆိုရာမှာ ခု တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ ပြောနေတဲ့ PHD ဘွဲ့ များ ကို
ဆိုလိုတာပါ မြန်မာပြည်က ရိုက်သတ်လို့ မကုန်တဲ့ သာမာန် အတန်းရ ဘွဲ့ ရ တွေ ကိုမဆိုလိုပါဘူး။ ပညာဆို
တာ လူခိုးလို့ မရတာကြောင့် ကိုယ့်ဆီမှာခိုင်မာတယ် ပညာရွှေအိုးလူမခိုးလို့ ရှေးကစာဆိုရှင်များ မိန့်ခဲ့တာပါ။
ကျမလည်းပညာတက် ဘွဲ့ ရ ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ချင်တာပေါ့ ဘယ်သူမဖြစ်ချင်ပဲရှိပါ့မလဲ ဒါပေမဲ့ တော်လှန်ရေး
တခုမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ အတ္တသတ်သတ်ကြည့်နဲ့တော့ ပညာရှင် တွေဖက်ခုန်
မကူးသွားကြပါနဲ့ ။ တွေးခေါ်မျော်မြင်မှု နဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေ ဟာလေ့လာကျတ်မှတ်ရင်ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကို အစွန်းရောက်ပြီး တော်လှန်ရေး ကိုကျောခိုင်းသွားမယ် ဆို ဘယ်လို ပညာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်သွားပါစေ
တော်လှန်ရေး ရဲ့ ဒဏ်ခတ်တာတော့ခံရပါလိမ့် မယ် ။
ကျမကြားနေသိနေရပါတယ် အရေးတော်ပုံကြီး မှာဘယ်တုန်းကမှာဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့ ဘူး မကြားဖူးတဲ့
သူတွေ က တစ်ခါတစ်ရံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကိုများဝေဖန်လိုက်ရင်ဖြင့် စာထဲကသင်ရိုး ညွန်းတန်းတွေအတိုင်းပါပဲ ဘာတဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဆိုသည်ကများ ကျမ ကတစ်ခါတစ်ရံ ဟား တိုက်
မိပါတယ် စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူ နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဘယ့်နှယ့် သူ့ တို့ နောက်က ဘွဲ့ တက်လည်း
တက်နိုင်ရိုးရဲ့ သူတို့ သာတကယ်ကျွမ်းရင် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရတာကြာပါပကော --
တော်လှန်ရေးမှာ နောက်မှပဲပါပါ ရှေ့ကပဲပါပါ တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်လာပြီဆိုကတည်းကတိုင်းပြည်အတွက်
ပေးဆပ်မဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဆောင်ရွက်မဲ့ ပုဂိုလ်ကြည့် ပါပဲ သတိထားရမှာက အတွေ့ အကြုံနဲ့ ကျော်ဖြတ်
မှုအားကောင်းသူသာလျှင် တော်လှန်ရေးရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်ကို ပုံဖော် သုံးသပ် နိုင်တာပါ ။ပညာ
ရှင်တွေ ကတော့ စာအုပ်ထဲကအတိုင်း အခြားနိုင်ငံတွေ ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ အတိုင်းသုံးသပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့သူတွေ
မှာရှိတဲ့ပညာရပ်တွေ ကို ပိုက်ထားပြီး အတွေ့ အကြုံတွေ ကို ကျော်ဖြတ် ဖို့ လို့ အပ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် တိုင်း
ပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာ နည်းနာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ ၇ဲ့ စံနမူနာကိုယူပြီး ပညာရှင်တွေ နဲ့ပေါင်း
ပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ တော်လှန်ရေးကာလ မှာတော့ သတ္တိရှိရှိ ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်
ရဲတဲ့ စေတနာမှန်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမား တွေ များများရှိနေဖို့သာအဓိက ကျတယ် ဆိုတဲ့ကျမအယူအဆ
ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
Posted by LRDP at 10:37 AM6comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခြင်းအပေါ် ဥပဒေ အရ သုံးသပ်ချက်
Posted by LRDP at 6:57 AM0comments Links to this post
လည် ၁၂ နာရီ မှ နေ့လည် ၂နာရီ ၃၅အထိ တွေ့ဆုံ ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ရှေ့နေတဦးအပြင် NLD ရဲ့ပြော
ရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းကသူတို့ ရှေ့နေ၄ဦးလုံး တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အပေါ် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်ချထားတဲ့ အမှုအတွက် လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ တရားရုံးချုပ်ကိုအယူခံတင်သွင်း
မှာ ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ်
ချပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့ရှေ့နေတွေကို အဲဒီ အင်းယားကန်စောင်းကအိမ်
မှာတွေ့ ဆုံစဉ်ကတည်းက သူမအပေါ်ချမှတ်တဲ့ စီရင်ချက်အပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိတဲ့ အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး ရှေ့နေများကို အယူခံအတွက် ပြင်ဆင်ရန် အမိန့်ပေး ခဲ့ပါသည်။အဲဒီ ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့မှု အမိန့်ထဲမှာသူမ
ဟာ လိုအပ်သလို ကျမ်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုခံယူခွင့်ရှိကြောင်းပါခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မေလ
၃၀ရက် ထပ်မံ ထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ ရစဉ်ကတည်းက ၆နှစ်ကျော် ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက် ကုသမှု ပြုလုပ်ပေး
ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ သမားတော် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့် ပြသခွင့်ကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန် အထိ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိသေးဟုလည်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပြခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ နှစ်နာရီခွဲကျော်တွေ့ဆုံ
ခဲ့စဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန် ဆီနိတ်တာ မစ္စတာဂျင်ဝက်၏ ဆောင်းပါးပါ မြန်မာ
နိုင်ငံ အပေါ်စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ထားမှု အကြောင်း ရေးသားချက်များနှင့် ပါတ်သက်၍ သူမဟာ လွန်ခဲ့ သော
၁၅ နှစ် ကတည်းက ဒီကိစ္စတွေကို ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ နအဖ ခေါင်းဆောင်များကို အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း တုန့်ပြန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပြသွားပါတယ်။
မေး(လ်) ပို့ ပေးသော အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by LRDP at 6:37 AM0comments Links to this post
ABSDF ၏ ပထမဦးဆုံးဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးထွန်းအောင်ကျော်(အမေရိက) ၏ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါ့ မလား?
Posted by LRDP at 7:00 AM0comments Links to this post
ညွှန်း-၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၈-၂၉) ရက်နေ့များတွင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင် အဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ၊ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်ဆးအဝေးပွဲသို့တင်သွင်းသည် နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာ
(၁)နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံမူများ၌ နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍ တွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး တို့ကိုအစဉ်တစိုက် ဦးတည်သည်ဟု ချမှတ်ထားခြင်း၊
ကို အစဉ်တစိုက် ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။
Posted by LRDP at 9:58 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 9:49 AM0comments Links to this post
ဒီကိစ္စကိုကျမပြောချင်နေတာ ကျမ အလုပ်တာဝန်တွေ
နဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ အချိန်အတော် ယူရပါတယ်
စိတ်ထဲပေါ်လာတာကတော့ ခန ခန ပဲ အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာဆက်ဆံရေး တွေမှာမြောက်ကိုရီးယားကို
နိုင်ငံ သူနှစ်ယောက် ကိုပြန်ခေါ်လာပြီး မြန်မာပြည် ကို အထက်လွှတ်တော်အမတ်သွားလိုက်တာကျမ တို့ ခေါင်း
ကိုကြည့်ရင် ကမ္ဘာမှာ အမေရိကန် သူလုပ်သမျှဖြစ်နေတာလေးတွေသ တိထားမိပါတယ် ။
မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နယူးကလီးယား အတွက် ပေါင်းစည်း နေကြတာလည်းကမ္ဘာသိ မြန်မာ
မဲ့ သူတို့ ငတ်နေတာ အမေရိကန်စီးပွါးရေးဖွင့် ဖို့ ပါပဲရင်ထဲကမရှိပဲဆက်ဆံနေကြပေမဲ့ အပေးအယူကတော့
မျှလို့ ရယ်ပေါ့ ။ဒါ ကောင်းတယ် ဂုဏ်ယူတယ် ချီးမွမ်းတယ်လို့ဘန်ကီမိုးဘယ်လိုပြောပြော ရိုးသားတဲ့ပေါင်း
စည်းမှုညှိနှိုင်းမှုလို့တော့ ကျမ ဘယ်လိုမှ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
ကျမကတော့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ကို နိုးဆော်ချင်တာ ကျမ တို့ အရေး ကျမတို့ ဘာသာပိုတွေးပြီးပိုလုပ်ကြ
တာပိုကောင်းပါတယ် ။ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အစိုးရကမှ သူတို့ နိုင်ငံသူတို့ နိုင်ငံသားထိ ခိုက်နစ်နာမှာကိုမလိုလား
ကြပါဘူး။တကယ်လည်းသူ့ ပြည်သူကိုသူတို့ စောင့်ရှောက်ပုံတန်ဖိုးထားပုံဟာကျမတို့ တိုင်ပြည်အနေအထား
တစ်ယောက် တည်းအတွက် ဘာတွေ ဘယ်လောက် အပေးအယူ နဲ့ လဲလှဲသွားလဲ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။။ကျမ
တို့ ကသာကျမတို့ ခေါင်းဆောင်ကိုဘာနဲ့မှလဲပြီးနေအိမ်ထဲကမထုတ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်လည်း
အသုံးမကျတဲ့နေရာကိုရောက်နေလို့ သုံးမရဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ အတွက်နောင်တ ရမိပါတယ်။ဒီပုံလေးမေး(လ်)
တစ်ခုကရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအားကိုးရာ ဆိုတာပိုမြင်သာလာတာကြောင့်ကျမတို့ နိုင်ငံ
အရေး ကျမတို့ ပဲ တိုက်ပွဲဝင်ပေးရမှာအသေအ ချာပါပဲ လို့ ခံစားတင်ပြလိုက်ပါတယ် ။။
Posted by LRDP at 3:26 AM0comments Links to this post
ဂျွန်ယက်တော ဖွင့်ပြောပြီ - နအဖလုံခြုံရေးတွေက လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး သူ့ ကို ၀င်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်တဲ့
John Yettaw, The Swimmer Speaks
August 21, 2009, 02:45:45 PM
John Yettaw, just back from his Burmese prison odyssey, explains how he unwittingly created an international diplomatic crisis.How wasaretired bus driver from Missouri able to makeaflipper-clad, two-kilometer swim to the heavily guarded house of Burmese pro-democracy leader Aung Sang Suu Kyi, one of the world's most famous dissidents? While John Yettaw languished in Burmese jail during his trial for "illegal swimming," all we could do is speculate. But now, in an exclusive interview with NEWSWEEK, Yettaw has offered an explanation: Burmese security officials let him. "I don't know why they didn't stop me," he says. "The man with the AK-47 shook my hand and let me in."In his first full-length interview, conducted by telephone from his home in central Missouri, Yettaw addressed the rationale for his undiplomatic dip, responding to critics and speaking at length about his commitment to Burma. "I want to free Myanmar. I want to stop the suffering there. I am antijunta. I will never be at peace, emotionally or psychologically, until that woman is free, until that nation is free," he said.Yettaw burst onto the front pages of the world's papers in May, when he had made an uninvited two-day visit to the home of Suu Kyi. "The Lady," as locals call her, trounced opponents in the country's last open election in 1990, but the junta refused to recognize the results and has kept her under arrest for 14 of the past 20 years for trying to topple the regime. She was due to be released on May 27, just weeks after Yettaw showed up, well ahead of next year's landmark national elections—the first in two decades. But earlier this month, Suu Kyi was sentenced to 18 more months of home confinement. On Sunday, Yettaw was freed from seven years of hard labor when U.S. Sen. Jim Webb negotiated for his release; he was deported back to the United States.A quixotic man who didn't haveapassport until last year, Yettaw is an unlikely protagonist on the international political stage. The junta believes that antigovernment activists used Yettaw to embarrass its leaders, while Suu Kyi's supporters say that the government used the American asapretense for keeping their best-known critic under house arrest rather than risk igniting the opposition ahead of the 2010 elections. Yettaw's family, for its part, doesn't know what to believe. After years of questions that have gone unanswered and behavior that doesn't quite add up, they have come to accept Yettaw the way he is—bighearted but unsteady—without asking too many follow-ups. Late Thursday night, the 53-year-old Missourian remained an enigmatic figure, failing to clarify lingering questions and offering rambling and occasionally contradictory responses. "I have to be careful what I say or it will hurt the people of Myanmar," he explained, using Burma's other name. Echoing his court testimony, he says he traveled to Burma hoping to visit the Nobelist Suu Kyi—and to warn her that he'd learned, inadivine vision, terrorists were planning to assassinate her. He denied that the military junta ruling the country had put him up to the visit. "I've been accused of being CIA, of being on the books of the junta. The idea is just ridiculous," he said.Still, the question remains: why didn't guards stop Yettaw as he made his way across the lake to the home of the country's most famous prisoner? Yettaw had madeasimilar aquatic bid for the Suu Kyi house in November 2008, but he was turned away by her on-site companions. He told family that he had been captured by guards at gunpoint on his way back from her house. The guards, he says, apparently unaware of his first attempted visit Suu Kyi's house, bought his story that he had fallen into the lake while fishing and let him go.It's not clear why authorities tookaharder line this time, putting Yettaw on trial and ultimately sentencing him to jail. He says he doesn't know, but indicates that authorities did not seem too concerned about stopping him: instead,agroup of guards languidly threw rocks at him as he paddled along. "I told [the judge at trial], Haul them in here and ask them for yourself." He added: "Maybe they were just lazy, or untrained or so cocky that they didn't think anyone would try to swim by them," Yettaw said. "Maybe they are so used to people being scared that they didn't expect anyone to do something so courageous."Yettaw declined to say where he initially got the idea to visit Suu Kyi by crossing the lake. But according to one Western diplomat, who requested anonymity in order to speak freely, intelligence reports show that senior Burmese officials were told to come up withaway to keep the Lady incarcerated, as her May 27 release date loomed. Aroundaweek before Yettaw's second swim, this person says, two men posing as members of the reform-minded National League for Democracy allegedly approached Yettaw in Mae Sot, an untidy border town in Thailand, and told him that the Lady was ready to receive him. (spdc did not respond to requests for comment.)Yettaw won't say what he and Suu Kyi discussed once he made it to her house. "It is so personal that I have no right to discuss our conversation with anyone, not with my wife and not with my children," he said, adding that he is "brokenhearted" that she is under house arrest once more. Still, he doesn't see his actions as the cause of her predicament. "I didn't put her there. I didn't imprison that woman."Actually, he says, his visit may have even saved Suu Kyi from the terrorists he believes were out to get her. He is notahero, though: "I don't like titles. You can call me John." He bristles at the suggestion that he is unstable and possibly mentally ill, as some people, including one of his three ex-wives, has suggested. "I am not crazy. I am not insane. I am not bipolar."Since touching down in Springfield, Mo., on Wednesday, Yettaw has keptalow profile—ducking out of an airport side door without picking up his luggage in order to avoid the waiting scrum of reporters and photographers. "I was really worried that he would be different or changed," Yettaw's 21-year-old daughter Carley, says. "But he wasn't. It was just like seeing my dad regular. It wasn'tabig deal." His wife Betty has also downplayed the homecoming, focusing instead on the financial burden of her husband's long trip. Although Webb helped secure his release, Yettaw had to pay his own travel expenses and foot the bill foranurse assigned to monitor his health. "They are breaking us," says Betty, who is also keen to deflect criticism of John. "Yeah, [Suu Kyi is] back under house arrest, but people who didn't know where the heck Burma was, who couldn't find it on the map for all their life, now know."For now, Yettaw is taking his return to America "one day atatime." Later this month, he plans to pick up his three youngest children—he has five surviving kids in all—in California, where they stay with their mother every summer. He also intends to spend some time working on his two book projects:a"dissertation" about forgiveness (although he is not enrolled in an academic program) andabook "aboutahigher power, about recognizing the bitter and the sweet."Would he go back to Burma? "Not without my family," he said, "and not without an invitation."Tony Dokoupil With Lennox Samuels from Thailand (Newsweek Web Exclusive)
မေး(လ်) ပို့ လာသော ရွှေနန္ဒ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by LRDP at 1:02 AM0comments Links to this post
(၁၉-၈-၂၀၀၄ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဗိုလ်မှုးကြီးဟောင်း သီရိပျံချီ ဦးကြည်မောင် သို့ )
တို့ တိုင်းပြည် ကံကြမ္မာက
ကိုယ်သန်သလိုဆုံးဖြတ်သူတွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့ရ---
အာဃာတ မထားကြနဲ့ဆိုမှတော့---။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီ့ဒဏ် သူလှိမ့်ခံခဲ့ရရှာတယ်----။
သို့ ပေမဲ့ ကြယ်စင်အလားလမ်းပြရင်း
အခုတော့ --- တို့ ခေတ်ရဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်
တချို့ တလေ ပျော်ကောင်းပျော်နေကြလိမ့် 
နီရိုး ဘုရင် ၀င်စားသူတွေလည်း
ကျမ ဒီကဗျိာု ခုမှပြန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီကဗျာ ရေးသူက ပြည်တွင်းကပါ ကဗျာ ကို ရန်ပုံခွင်းတော်လှန်ရေးစာစု မှာဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ကျမကူးယူတင်ပြတာပါ
ကာယကံရှုင် ကလည်း ခွင့်ပြုလိမ့် မယ်လို့ ယူဆပါတယ် ဒီကဗျာ ကိုရေးသူဟာ ဘဘ ရဲ့ခံစားချက် နဲ့ ပေဆပ်ခဲ့မှုအနန္ဒ ကိုသူလည်းကျမထက်မနည်းသိသူပဲ ဆိုတာ
ကဗျာဖတ်လိုက်တာနဲ့ ကျမနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် မို့ကူးယူတင်ပြဖြစ်တာပါ
Posted by LRDP at 11:41 AM 1 comments Links to this post
နအဖ ဖွတ်လူစုက ကျင်းပမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူတွေအားလုံး ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွပ်ခံရမည့် ပွဲတစ်ခုပါ၊ ဒီနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲနေကြတယ်၊ စုတ်ပြတ်နုံခြာတဲ့ဘ၀တွေ
ွကို ခါးသီးစွာဖြတ်သန်းနေကြရတယ်၊ လူစဉ်မမီ လူအဆင့်အတန်းမရှိ အဓိပ္ပါယ် မပြည့်ဝတဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ ဖြစ်
သလို ကြုံသလို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတယ်၊ အနှစ်(၂၀) အတွင်းမှာ နအဖဟာ တိုင်းပြည်ကို ရစရာမရှိ
အောင် ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်၊ အနှစ်သာရအနေနဲ့ မြန်မာဆိုတာ ငတုံး ငအအဆင့်အတန်းမဲ့ သူတွေ
ွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အရာကို သာ တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ခြင်းခံခဲ့ရပေသည်။
ပြည်သူအတွက် အကျိုးကျေးဇူးမများတဲ့အပြင် ပြည်သူလူထုကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မတရား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် ထောင်ချ ညှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်နေတဲ့ လူယုတ်မာ ဖွတ်တစ်သိုက်ကို ဖြုတ်ချပစ်ရန် တာဝန်မှာ ပြည်သူလူထု
တစ်ရပ်လုံးရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပေသည်၊ နအဖကို ဖြုတ်ချပစ်နိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ လူထု
အုံကြွတော်လှန်ရေးပင်ဖြစ်သည်၊ နအဖသည် လူစကားသူစကားကို နားထောင် တတ်သည့် သတ္တ၀ါ များ
မဟုတ်ပေ၊ နအဖဆီမှာ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုနေ၍ အကျိုးမရှိ၊ နအဖ ဖွတ်တစ်သိုက် တိုင်းပြည်မှာ မရှိ
တော့မှသာလျှင် စစ်မှန်သည့် အနှစ်သာရပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်၊
ယခုအခါတွင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မွေးရာပါ တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်လာပေပြီ၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးသည် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေပေသည်၊ ကျွန်ုတို့၏ သားစဉ်မြေးဆက် လူတန်းစေ့ ဘ၀
ထမ်းဆောင်ရပေမည်၊ နအဖသည် ကျွန်ုတို့၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် ဆန္ဒကို ဘယ်တော့ခါမှ ချုပ်နှောင်ထား၍မရ
ခဲ့၊ ၄င်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပင် မဆလ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြိုလှဲပစ်နိုင်ခဲ့ပေသည်၊ ယခုတစ်ခါ နအဖ စစ်အာဏာရှင် ဖွတ်တစ်သိုက်ကို ဖြိုလှဲဖို့ရန် ခေတ်စနစ်ကြီးက အမှန်တကယ်တောင်းဆိုနေပြီဖြစ်သည်။
မဝေးတော့သည့်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားအပြင်းထန်ဆုံးသောလူထုတိုက်ပွဲတစ်ရပ် ဆင်နွဲ
တော့မည်ဖြစ်သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးက ဦးဆောင်ပီး နအဖစစ်အာဏာ
ရှင် တော်လှန်ရေးသပိတ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပီးဖြစ်သည်၊
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအနေနှင့် မိမိတို့၏ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံတွေ
ကို သင်ခန်းစာယူပြီး စနစ်တကျ စည်းကမ်းရှိရှိ လူထုတိုက်ပွဲကို ပြီးဆုံးအောင်ပွဲရသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်
ကြဖို့ အထူးလိုအပ်ပေသည်၊ မိမိတို့ ရပိုင်ခွင့် အတွက် မိမိတို့သာလျှင် ဦးဆောင် တိုက်ပွဲဝင်ကြရမည်ဖြစ်
သည်၊စစ်အာဏာရှင်စနစ် အလုံးစုံ ချုပ်ငြိမ်းပပျောက်သွားရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက တာဝန်ဖြစ်သည်၊
ခေတ်ဆိုး စနစ်ဆိုးအောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀များစွာ အသက်ပေါင်းများစွာ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အနှိမ်ခံ အဖိနှိပ်ခံဘ၀တွေနဲ့ အဆုံးသတ်ခံမလား မခံဘူးလားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်သမျှ အချိန်တိုင်း အချိန်
တိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ မေးရတော့မည့်အချိန်ကျရောက်နေပီဖြစ်သည်၊စစ်အာဏာရှင်ကြိုးကွင်းသည်မကြာမီ
အချိန်တွင် ပြည့်သူ့လည်ပင်းကို စွပ်ဖို့ ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနိုးဆော်လိုက်ရပေ
Posted by LRDP at 9:35 AM0comments Links to this post
လမ်းတစ်ခုကိုလျောက်ရင်အဆုံးထ်ိလျောက် ( ဘဘဦးကြည်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်း ငါးနှစ်ပြည့် )၁၉-၈-၂၀၀၉
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို စစ်ခုံရုံးတင်ပစ်မယ် လို သူ ပြောခဲ့သလိုမြန်မာပြည်ထဲကခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလောက်က
ဗိုလ်သန်းရွှေကို လည်လှီးပစ်မယ် လို့ပြောကြရင် သိတ်ကောင်းမှာပဲနော် --
ဒီကနေ့(၁၉-၈-၂၀၀၉) ဟာ ကျမတို့ ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့
အောင်မြင်နိုင်အောင် ဘဘဦးကြည်မောင်ရဲ့ စည်းရုံးစွမ်း
ရည်နဲ့ အောင်ပွဲခံ နိုင် ခဲ့ တာပါ ။။စစ်အုပ်စုက ပြည်သူ့ 
အာဏာ ကိုပြည်သူဆီ မလွှဲပေး ပဲ ဆက်လက်အုပ်စိုးထား
ပေမဲ့၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းက
တော့ ကမ္ဘာမှာ သိတ်ကို မြင့်မားခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ ။
ကျမတို့ဘဘ ဦးကြည်မောင်ရဲ့ စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်နဲ့ 
နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီကနေ့ဟာဆို ဘဘ ကွယ်လွန်
ခဲ့တာ ၅နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်သလို ကျမ မြန်မာပြည်ကို ချန်ရစ်ခဲ့ရတာလည်း နောက်လ ဆို ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့
ပါပြီး။ ဘဘ ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုတွေ ကို ဒီစာမျက်နှာမှာပဲ ရှာပြီး ထပ်ဖတ် ကြည့် လိုက်ကြပါဦး။
မဖတ်ဖြစ်သေး တဲ့သူတွေ ပေါ့ ။ ကျမ တို့ မှာ ကိုးကွယ်ရာအားထားရာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရား ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဘုရား
ရှင်ရဲ့တရားတော်တွေ အရ သူတော်ကောင်းတွေ နဲ့ပေါင်းဖေါ်ယှဉ်တွဲ ရခြင်းရအကျိုးတွေ သူတော်ကောင်းတွေ
ရဲ့ နည်းနိဿယတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးသူတွေ ရဲ့ အကျိုးတွေ အားလုံးသိရှိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။။ ကျမ ကတော့
ကျမ ဘ၀ မှာ လူဖြစ်ရကျိုးနပ် တယ်လို့ခုနေကျမသေဆုံးသွားလည်း ကျမကြေနပ်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်
ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုရင် ကျမ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွ ခုလို မှီဝဲခွင့်ရလို့ ပါပဲ။
ဒီကနေ့ကွယ်လွန်တာ (၅) နှစ်ပြည့်တဲ့ ဘဘ နှစ်ပတ်လည် ကို ကျမ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာတော့ အတော်ကိုစိတ်
မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ ဘဘရောက်ရာဘ၀က သာဓုခေါ်နေမှာပါ ကျမ ဘဘ ရဲ့ ကျေးဇူးတွေ ကို
သူတော်အချင်းချင်းသတင်းလွှေ့ လွှေ့ ပေါင်းဖက်တွေ့ဆိုသလိုမျိုး ပန်းသတင်းလေညင်းဆောင်သလိုမျိုး ကု
သိုလ်ပြုခဲ့ပါတယ် ဘဘ --ဘဘ ရေ ဘဘ မှာကြားခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်ခုကိုလျောက်ရင်အဆုံးထိ်
လျောက် စေတနာအရင်းခံပြီးသတ္တိရှိရှိလျောက် ရောက်ကိုရောက်မယ် ဆိုတဲ့ စကား သမီးမေ့မထားရုံ
တင်မက လက်တွေ့ ကျင့်ကြံနေပါတယ် ။ ဘဘ ကောင်းရာဘုံဘ၀ မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ ----
Posted by LRDP at 8:34 AM0comments Links to this post
ဒီပုံကဘဘ ဦးကြည်မောင်မကွယ်လွန်ခင်တစ်နှစ်လောက်အလို မှာ
ကျမနဲ အတူ ဘဘကိုလေးစားချစ်ကြည်တဲ့ လူငယ်တွေ နဲ့အမှတ်
တရ ရိုက် ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ ။ ယာဘက်အစွန် က မျက်မှန် နဲ့ လူငယ်က
ကျော်ကျော် ပါ ဒဂုံမြို့ သစ် မြို့ နယ် လူငယ်တာဝန်ခံလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆
မေဒေးနေ့ မှာအမေရိကန်စင်တာမှာအလုပ်သမား အခွင့်အရေးပညာ
ပေး ဖို့ကြိုးစားမှု နဲ့ ယခုထောင်နှစ်၂၀ကျခဲ့နေရသူပါ။ဥပဒေပညာ
ရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ဒုတိယမြောက် သူရိန်အောင် ကလည်း
ကျော်ကျော် နဲ့ အတူ အမေရိကန်စင်တာမှာမေဒေး နေ့ကို ဦးဆောင်
ကျင်းပသူ အနေနဲ့ယခု ထောင်ထဲ မှာ ၂၈ နှစ် ကျခံနေရပါတယ် ။
ကျန်နှစ်ယောက် ကတော့ ကျမ နဲ့ကျမ ခင်ပွန်းပါ ။ ကျမတို့ တတွေ
ဘဘကျမ်းမာစဉ်မှာ ဘဘဆီက အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့
ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ သတ္တိတွေ အရယူခဲ့ပါတယ် ။ထောက်လှန်းရေးဗိုလ်ချုပ် ကို တရားဟော စင်မြင့်က နေ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ခင်ဗျား ကြိုးစင်တက်
ရမယ် ခင်ဗျား ကို ငုရင်ဘတ် ခုံရံးကိုတင်ပြစ် မယ် လို့ဘယ်သူများပြောရဲ လို့ တုန်း (ပြည်ပ ကအော်တာမဟုတ်ဘူးနော် )
နိမိတ်ကောင်းတဲ့ဒေါင်းဖြူလေးပါ ကျမတို့ တိုင်းပြည် ညစ်နွမ်းမှုတွေကင်းတော့မယ်ထင်ပါရဲ့
ဒေါင်းဖြူလေးတွေ မေး(လ်) ပို့ လာသူ အား ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။
Posted by LRDP at 4:34 AM 1 comments Links to this post
19 ရက်နေ့ မှာကွယ်လွန်ခြင်း ရ နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကာနယ်ကြည်မောင်လို့ လူသိများတဲ့ ကျမတို့ ရဲ့ ချစ်လှစွာသောခေါင်းဆောင်ကြီး ဘ၀ တစိတ်တဒေသ
ဘဘဦးကြည်မောင်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနဲ့ အတူ ဘဘရဲ့
တပည့်သားသမီးတွေ ပုံလေးတွေ တွဲ တင်ထားပါတယ် ။
ဒီထဲက အများစုကတော့ ထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်
အမိန့် ချခံထားရတဲ့ လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ် ။ အပြင်မှာရှိနေသေးသူ တွေနဲ့ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ကျမတို့ က
တော့ ဘဘ လိုချင်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး တွေမရမချင်း တိုက်ပွဲရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျရာ
တာဝန်တွေဆောင်ရွက်ရင် စစ်အာဏာရှင်ကို အမြင်ပြတ်ပြတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ ။ ဘဘ ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေ
ကြောင့် တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားမှာ ကျမတို့ အတွေးအခေါ်တွေ နောက်မရောက်ခဲ့တဲ့ အတွက် လမ်းပြ
ပေးခဲ့တဲ့ ဘဘ ကို ကာယ ၀စီ မနောချီပြီး ရှစ်ခိုး ဦးချလိုက်ပါတယ် ။။ ဘဘ ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ရာဘုံဘ၀မှာ
သူတော်ကောင်းအကျင့်တွေ နဲ့ တင့်တယ်နေဦးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါကြောင်း စာဖတ်သူ ဘလော့မိတ်ဆွေ များ
အား ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
Posted by LRDP at 6:44 AM2comments Links to this post
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမီးးရှူးတန်ဆောင် ဘဘ ဦးကြည်မောင်
လာမဲ့၁၉ ရက် နေ့ ဟာ ကျမ တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်တွေရဲ့ချစ်လှစွာသောခေါင်းဆောင်
ဘဘကြည်မောင်ရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ ထောင်ထဲမ၀င်ခင်နဲ့ ထောင်က
လွှတ်ပြီး ပါတီတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလ တစ်လျောက်လုံး ဘဘဦးကြည်မောင်ရဲ့ လူငယ်တွေ
အပေါ်ထားတဲ့စေတနာမေတ္တာတွေရယ် သူဖြစ်စေ့ချင်တဲ့ အမှန်တရားအတွက် သတ္တိရှိရှိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြော
ရဲဆိုရဲ တက်မှုတွေ ကို ကျမတို့ အတုယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဘမရှိတော့ပေမဲ့ ဘဘ စကားတွေ ဘဘရဲ့ မျှော်မြင်
မှုတွေကို ယနေ့ ထိလက်ခံ ယုံကြည်နေဆဲပါ။ ကျမ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မှာ ပါဝင်ချိန်ကစ ကျမ
အင်မတန်လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ထဲမှာ အန်တီ ဘဘဦးကြည်မောင် ဘဘ ဦးတင်ဦး တို့ ဟာထိပ်တန်းမှာပါပဲ ။
စစ်အုပ်စုကို လက်ညိုးထိုးပြီး ရဲရဲတင်းတင်း ဗြောင် မင်းတို့ ကို စစ်ခုံရုံးတင်ပစ်မယ် လို့ ပြောရဲပြောခဲ့တဲ့ ဘဘ
ဦးကြည်မောင် လူ့ လောကမှာမရှိတော့ ပေမဲ့ သူ မွေးဖွါးတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ရဲရဲတောက်လူငယ်တွေကြား
မှာသူ့ စကား သူ့ အတွေးအခေါ်တွေအများကြီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်။လူလောကမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်သူဟာ
ဘယ်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာအရေးသိပ်ပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ။ ဒီစကား အတိုင်း
ဆို ဘဘ ဦးကြည်မောင် ဟာသတ္တိရှင်တွေအများကြီးကို နိုင်ငံရေးအမြင်ဗဟုသုတတွေ အနုပညာကိုနားလည်
ခံစားတက်မှုအသိတွေ တခြားစာပေ ဗဟုသုတတွေ ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ကျမ ဘဘကိုပိုသတိရဆုံး အရာနှစ်ခု၇ှိပါတယ်။၁၉၉၅-၉၆ အန်တီစု ခြံရှေ့ တရားပွဲ ကဘဘရဲ့စကားတွေ ပြန်
ပြောရရင် အမှတ်ရတာတွှေမကုန်နိုင်အောင်ရှိသလို ဟာသနှော အားရပါးရပြော ဘဘရယ်မောလိုက်ရင်ဖြင့်
တကယ့်ကို လူတိုင်းရင်ထဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ တိုက်ကွက် တွေချည်းပါပဲ။သတိပိုရတဲ့ ပထမ အချက်က နိုင်ငံခြားသတင်း
တွေကြည့်ရင် ဘဘ က သူ့ တီဗွီရှေ့မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှု ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ အနုပညာတွေ ကျမ
တို့ ကို ဖွင့်ပြပြီး သူလေ သူ့ တိုင်းပြည်ကိုသိပ်တိုးတက်စေ့ချင်တဲ့စေတနာကို ထုတ်မပြောပဲ နဲ့ကျမ မြင်သာခဲ့ရ
ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘဘအိမ်မှာ ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ နယူးရီးယား ည ပါပဲ အဲဒီ့ည ဆိုဘဘရဲ့
မိတ်ဆွေတွေ၊ ရင်းနှီးတဲ့ ဘဘရဲ့ တပည့်သားတွေ နဲ့အမြဲဆုံဆည်းခဲ့ရတဲ့ ညပေါ့ ။
ကျမနယူရီးယား ညရောက်တိုင်း ဘဘ ကိုပိုသတိရမိပါတယ် ။
ဘဘ ဟာ ကွယ်လွန်ခါနီးအထိ မနေမနား နိုင်ငံရေးသင်တန်း တွေပေးခဲ့ နိုင်သူလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ ဘဘ ရဲ့
စကားတွေ မျိုးဆက်သစ်တွေ နားထောင်ရအောင် ကျမ ပါတီဝင် လူငယ်တွေကိုဘဘဆီခေါ်သွားရင်များ ဘဘ
ပီတိတွေဖြစ်လို့- ပြီးတော့ လူငယ် တွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသတ္တိတွေအတွေး
အခေါ်တွေ မြင့်မားအောင် နိုင်ငံတကာကလူ့ အခွင့်အရေးတွေပြည့်ဝနေတာတွေ နဲ့ အားကျစရာ ကောင်းတဲ့
တော်လှန်ရေးသီအိုရီတွေ သမိုင်းကြောင်းတွေ ပြောပြတော့တာပါပဲ ။
ဒါတင်မက အင်္ဂလိပ်စာကိုပါ သင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျမတော့မတက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘဘကိုသိပ်ချစ်သိပ်လေးစား
တဲ့ မခင်မိမိခိုင်၊ မြတ်သန္တာစိုး၊ မြင့်မြင့်စိုး၊မစန်းစန်းဝင်း တို့ လည်းခုချိန်ကျမ လိုဘဘကိုသိပ်သတိရပြီးဝမ်းနည်း
သူတို့ တင်မက ပါတီမှာ တိုးတက်ချင်တဲ့ လူငယ်ပညာတတ် ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ ကြားမှာဘဘ ဦးကြည်မောင်
ပါဆို အရမ်းထက်မြတ်တဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ လူငယ်တွေ ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးရဲ့အစ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ဘဘ ရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်
ကိုသွားပြီး အဲဒီ့က အပြန် လှမ်းလျောက် ဆန္ဒပြဖြစ်ခဲ့ မှု ကိုပဲ ကြည့်ရင် ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ကျောင်းသား
၏ခေါင်းဆောင်တွေ ပါတီလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘဘကို ဘယ်လောက်ကြည်ညိုလေးစားခဲ့လဲ ဘဘ
၂၀၀၄ က ကွယ်လွန်ခဲ့တာ သူတို့ တွေထောင်ထဲကနေဘဘဦးကြည်မောင်ဆုံးသွားပြီဆိုတာကြားတော့ နှမျော
ကျမတို့ ပါတီရဲ့ အားကြီးခဲ့တဲ့ မဏ္ဍိုင် ကြီး တစ်ခု ပြိုလဲကျသွားသလိုလူငယ်အားလုံးခံစားခဲ့ကြရတာပါ။ ခုနေ
“ဘဘသာ၇ှိရင် လေ” ဆိုပြီး အကုန် တမ်းတ နေကြဆဲပါ။ ဒါတင်မကလူထုကို အင်မတန်မှ စည်းရုံး နိုင်တဲ့
ခေါင်းဆောင်ကြီးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ မီးရှုးတန်ဆောင် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် လည်းလုံးဝ
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် လျောက်တဲ့လမ်းတစ်လျောက်မှာ အကုန်လုံးကြည့်တော့မှန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရခက်တာ
တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဂန္ဒီ ခမ်းမ ဟာ သူ့ ကြောင့် ပွဲမသိမ်း နိုင်ခဲ့တာလို့ ပြစ်တင်ဝေဖန်တာခံရတာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်လုံးဝမလုပ်တဲ့သူတွေ ဟာ မှားတာတွေ မအောင်မြင်မှု တွေနဲ့ ကြုံရ တာတွေ မခံစားရပါဘူး။ နောက်
ထပ် ဥပမာပေးပြီးပြောရရင် လမ်းမလျောက်ပဲထိုင်နေသူ ကခလုပ်ဘယ်တိုက်ပါ့မလဲ လဲကော လဲနိုင်ပါ့မလား။
ထလျောက်သွားတဲ့လူက လဲချင်လဲမယ် ခလုပ်တိုက်ချင်တိုက်မယ်ပေါ့-ကျမ ဒီလိုပဲယူဆပါတယ် သိပ် အရေးကြီး
တဲ့ အဆုံးအဖြတ်မှာ ဘဘ ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှုလွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်တာပေါ့။သိပ်သတိထားခဲ့ရတဲ့ကာလကိုး-
-ဒါကြောင့် ဘဘ ကို စစ်တပ်က လာတယ် ဂန္ဒီခမ်းမကိစ္စ သူအပြစ်ရှိတယ်လို့ ပြောနေသူတွေ ဟာ အဲဒီ့ အချိန်
တုန်းကသူ့ နေရာမှာ ဘယ်သူဝန်းရံ တည့်မတ်ပေးနိုင်ခဲ့လဲ ပြောတဲ့သူတွေကောဘာလုပ်နေလဲ လို့ ကျမ ပြောချင်
ပါတယ် ။( မနက်ဖန် ဘဘ နဲ့ ပတ်သတ်တာ ကျမ သတိရသမျှဆက်လက်တင်ပြပါဦးမယ်)
Posted by LRDP at 12:18 PM 1 comments Links to this post
1990 ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရဲ့မီးရှူးတန်ဆောင် ဘဘဦးကြည်မောင်
လာမဲ့၁၉ ရက် နေ့ ဟာ ကျမ တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်တွေရဲ့ချစ်လှစွာသော
ခေါင်းဆောင် ဘဘကြည်မောင်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ ထောင်
ထဲမ၀င်ခင်နဲ့ ထောင်ကလွှတ်ပြီး ပါတီတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလ တစ်လျောက်လုံး
ဘဘဦးကြည်မောင်ရဲ့ လူငယ်တွေအပေါ်ထားတဲ့စေတနာမေတ္တာတွေရယ် သူဖြစ်စေ့ချင်တဲ့ အ
မှန်တရားအတွက် သတ္တိရှိရှိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောရဲဆိုရဲ တက်မှုတွေ ကို ကျမတို့ အတုယူနိုင်ခဲ့ပါ
တယ်။ ဘဘမရှိတော့ပေမဲ့ ဘဘစကားတွေ ဘဘရဲ့ မျှော်မြင်မှုတွေကို ယနေ့ ထိ လက်ခံ ယုံ
ကြည်နေဆဲပါ။ ကျမ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှာ ပါဝင်ချိန်ကစ ကျမ အင်မတန်လေးစား
တဲ့ခေါင်းဆောင်ထဲမှာ အန်တီ ဘဘဦးကြည်မောင် ဘဘ ဦးတင်ဦး တို့ ဟာထိပ်တန်းမှာပါပဲ ။
စစ်အုပ်စုကို လက်ညိုးထိုးပြီး ရဲရဲတင်းတင်း ဗြောင် မင်းတို့ ကို စစ်ခုံရုံးတင်ပစ်မယ် လို့ ပြောရဲ
ပြောခဲ့တဲ့ ဘဘဦးကြည်မောင် လူ့ လောကမှာမရှိတော့ ပေမဲ့ သူ မွေးဖွါးတည်ဆောက်ပေးခဲ့
တဲ့ ရဲရဲတောက်လူငယ် တွေ ကြားမှာ သူ့ စကားသူ့ အတွေးအခေါ်တွေ အများကြီးကျန်နေခဲ့ပါ
တယ်။ လူလောက မှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သူဟာဘယ်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်
ခဲ့သလဲ ဆိုတာအရေးသိပ်ပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ။ ဒီစကားအတိုင်းဆို ဘဘ ဦးကြည်
မောင် ဟာသတ္တိရှင်တွေ အများကြီးကို နိုင်ငံရေးအမြင် ဗဟုသုတတွေ အနုပညာကိုနားလည်
ကျမ ဘဘကိုပိုသတိရဆုံး အရာနှစ်ခု၇ှိပါတယ် ။ ၁၉၉၅-၉၆ အန်တီစု ခြံရှေ့ တရားပွဲ ကဘဘ
ရဲ့စကားတွေ ပြန်ပြောရရင် အမှတ်ရတာတွှေမကုန်နိုင်အောင်ရှိသလို ဟာသနှော အားရပါးရ
ပြော ဘဘရယ်မောလိုက်ရင်ဖြင့် တကယ့်ကို လူတိုင်းရင်ထဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ တိုက်ကွက်တွေချည်း
ပါပဲ။ သတိပိုရတဲ့ ပထမ အချက် က နိုင်ငံခြားသတင်းတွေကြည့်ရင် ဘဘ က သူ့ တီဗွီရှေ့မှာ
နိုင်ငံတကာရဲ့ နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှု ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ အနုပညာတွေ ကျမတို့ ကို ဖွင့်ပြပြီး သူ
လေ သူ့ တိုင်းပြည်ကိုသိပ်တိုးတက်စေ့ချင်တဲ့စေတနာကို ထုတ်မပြောပဲ နဲ့ကျမ မြင်သာခဲ့ရ
ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘဘအိမ်မှာ ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ နယူးရီးယား ည ပါပဲ
အဲဒီ့ည ဆိုဘဘရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ ရင်းနှီးတဲ့ ဘဘရဲ့ တပည့်သားတွေ နဲ့အမြဲဆုံဆည်းခဲ့ရတဲ့
ညပေါ့ ။ ကျမနယူရီးယား ညရောက်တိုင်း ဘဘ ကိုပိုသတိရမိပါတယ် ။
ဘဘ ဟာ ကွယ်လွန်ခါနီးအထိ မနေမနား နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေပေးခဲ့ နိုင်သူလို့ ပြော
ရင် မမှားပါဘူး။ ဘဘ ရဲ့ စကားတွေ မျိုးဆက်သစ်တွေ နားထောင်ရအောင် ကျမ ပါတီဝင်
လူငယ်တွေကိုဘဘဆီခေါ်သွားရင်များ ဘဘ ပီတိတွေဖြစ်လို့- ပြီးတော့ လူငယ်တွေရဲ့
သက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီးသတ္တိတွေအတွေးအခေါ်တွေ မြင့်မား
အောင် နိုင်ငံတကာကလူ့ အခွင့်အရေးတွေပြည့်ဝနေတာတွေ နဲ့ အားကျစရာကောင်းတဲ့
ဒါတင်မက အင်္ဂလိပ်စာကိုပါ သင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျမတော့မတက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘဘ
ကိုသိပ်ချစ်သိပ်လေးစားတဲ့ မခင်မိမိခိုင်၊ မြတ်သန္တာစိုး၊ မြင့်မြင့်စိုး၊မစန်းစန်းဝင်း တို့ လည်း
ခုချိန်ကျမ လို ဘဘကို သိပ် သတိရပြီးဝမ်းနည်းနေကြဦးမှာပါ။
သူတို့ တင်မက ပါတီမှာ တိုးတက်ချင်တဲ့ လူငယ်ပညာတတ် ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ ကြားမှာ
ဘဘ ဦးကြည်မောင်ပါဆို အရမ်းထက်မြတ်တဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ လူငယ်တွေ ကို
မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကြီးဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ကြပါဘူး။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးရဲ့အစ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ ဘဘ ရဲ့ ကွယ်လွန်
ခြင်းနှစ်ပတ်လည်ကိုသွားပြီး အဲဒီ့က အပြန် လှမ်းလျောက် ဆန္ဒပြဖြစ်ခဲ့ မှု ကိုပဲ ကြည့်ရင်
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ပါတီလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ
ဘဘကိုဘယ်လောက်ကြည်ညိုလေးစားခဲ့လဲ ဘဘ ၂၀၀၄ ကကွယ်လွန်ခဲ့တာ သူတို့ တွေ
ထောင်ထဲက နေ ဘဘဦးကြည်မောင် ဆုံးသွားပြီဆိုတာကြားတော့နှမျောလိုက်တာ တဲ့
လေ။ ကျမတို့ ပါတီရဲ့ အားကြီးခဲ့တဲ့ မဏ္ဍိုင် ကြီး တစ်ခု ပြိုလဲကျသွားသလို လူငယ်အားလုံး
ခံစားခဲ့ကြရတာပါ။ ခုနေ “ဘဘသာ၇ှိရင် လေ” ဆိုပြီး အကုန် တမ်းတ နေကြဆဲပါ။
ဒါတင်မကလူထုကို အင်မတန်မှ စည်းရုံး နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ၁၉၉၀
ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ မီးရှုးတန်ဆောင် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် လည်းလုံးဝငြင်းစရာမရှိပါဘူး။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် လျောက်တဲ့လမ်းတစ်လျောက်မှာ အကုန်လုံးကြည့်တော့ မှန်ခဲ့တယ်
လို့ပြောရခက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂန္ဒီ ခမ်းမ ဟာ သူ့ ကြောင့် ပွဲမသိမ်း နိုင်ခဲ့တာလို့ ပြစ်တင်ဝေဖန်တာခံရတာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်လုံးဝမလုပ်တဲ့သူတွေ ဟာ မှားတာတွေ မအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ကြုံရ တာတွေ မခံစားရပါ
ဘူး။ နောက်ထပ်ဥပမာပေးပြီးပြောရရင် လမ်းမလျောက်ပဲထိုင်နေသူ ကခလုပ်ဘယ်တိုက်ပါ့မလဲ
လဲကော လဲနိုင်ပါ့မလား။ ထလျောက်သွားတဲ့လူက လဲချင်လဲမယ် ခလုပ်တိုက်ချင်တိုက်မယ်ပေါ့
-ကျမ ဒီလိုပဲယူဆပါတယ် သိပ်အရေးကြီးတဲ့ အဆုံးအဖြတ်မှာ ဘဘ ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှု
လွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်တာပေါ့။သိပ်သတိထားခဲ့ရတဲ့ကာလကိုး--ဒါကြောင့် ဘဘ ကို စစ်တပ်က
လာတယ် ဂန္ဒီခမ်းမ ကိစ္စ သူအပြစ်ရှိတယ် လို့ ပြောနေသူတွေ ဟာ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက သူ့ နေရာ
မှာ ဘယ်သူဝန်းရံ တည့်မတ်ပေးနိုင်ခဲ့လဲ ပြောတဲ့သူတွေကောဘာလုပ်နေလဲ လို့ ကျမ ပြောချင်ပါ
( မနက်ဖန် ဘဘ နဲ့ ပတ်သတ်တာ ကျမ သတိရသမျှဆက်လက်တင်ပြပါဦးမယ်)
Posted by LRDP at 11:55 AM0comments Links to this post